iWatermark 1.4 -Ifoto yokuFotwa kwe-iPhone kwiNtengiso yeVeki enye | Plum emangalisayo
IWatermark 1.4 -Ifoto yokuSebenzisa iiFoto kwi-iPhone ethengiswayo kwiveki enye
IWatermark 1.4 -Ifoto yoSetyenziso lwe-iPhone ethengiswayo ngeVeki enye-Ipapashwe ngomhla we-06/08/10
Ukuhlonipha ukukhutshwa kwe-iPhone 4 ngekhamera ye-Megapixel eyi-5, iPlum Amazing namhlanje ibhengeza ukuba iWatermark 1.4 iza kuthengiswa iveki enye. IWatermark ikhusela ngokulula kwaye ikhusele iifoto zakho kunye nomsebenzi wobugcisa ngewatch ebonakalayo ebonakalayo. Nje ukuba wongezwe kumfanekiso okanye umzobo, le watermark ibonisa indalo kunye nobunini. Kufana nokusayina ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Sayina ngokwedijithali iifoto zakho / umsebenzi wobugcisa kunye neWatermark ukubanga, ukukhusela nokugcina ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye nodumo.
Ukuhlonipha ukukhutshwa kwe-iPhone 4 ngekhamera ye-Megapixel emi-5, iPlum ngokumangalisayo namhlanje ibhengeza ukuba iWatermark 1.4 iya kufumaneka kwiveki enye ngeesenti eziyi-0.99 kuphela. I-iWatermark ibalulekile kuba ikhusela ngokulula kwaye ikhusela iifoto zakho kunye nomsebenzi wobugcisa obunomatshini obonakalayo oyi-watermark. Sakuba songezwa kwifoto okanye kwigrafu, le watermark ebonakalayo ibonisa indalo nobunini bakho.
Ukuba ungumfoti okanye umzobi, iWatermark ikusebenzela ngokongeza umzobo obonakalayo (ilogo okanye utyikityo) okanye i-watermark yombhalo. Kufana nokusayina ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Musa ukukhutshwa i-IP yakho. Yaziwa ngeefoto zakho kunye neminye imisebenzi yobugcisa usebenzisa iWatermark. Sayina ngokwedijithali iifoto zakho / umsebenzi wobugcisa kunye neWatermark ukubanga, ukukhusela nokugcina ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye nodumo.
* Yakha uphawu lwenkampani yakho, ngokwenza uphawu lwenkampani kuyo yonke imifanekiso
* Kulumkele ukumangaliswa kokubona iifoto zakho kunye / okanye umsebenzi wobugcisa kwenye indawo kwiwebhu okanye kwintengiso
* Ziphephe iingxabano kunye neentloko kunye nababhali abathi ababazi ukuba uyidalile
* Gwema isimangalo esineendleko esinokuthi sibandakanyeke kwezi meko zokusetyenziswa gwenxa kwepropathi yengqondo (IP)
* Kulumkele ukuxabana kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda (IP).
I-iWatermark igcina i-meta tags, isebenzisa iifomathi ezininzi zokungenisa / iziphumo kwaye inokwenza nezikhombisi. Unokuqhubekeka kwifayile enye okanye iifolda zamakhulu okanye amawaka eefoto. Inguqulelo 1.4 yongeza amandla e-watermark iifoto ezininzi.
I-iWatermark iya kukhula ibe luncedo njengoko iikhamera kwii-iPhones zisiba namandla kwaye zithathe indawo yeekhamera eziqhelekileyo. Ihlala isisixhobo esikwiqonga lesithabathaba se-iPhone, Mac kunye neWindows. I-iWatermark yeyona ndawo yehlabathi 1 isixhobo esithandwa kakhulu kwimifanekiso ye-watermark. Kwiveki e-1 (kude kube nge-6/14) iWatermark ifumaneka kuphela nge-0.99 ¢.
“Ubuhle beWatermark ngumdibaniso wayo wokusebenzisa ngokulula kunye nokusebenza. Ukuba ukhe wafuna ukuzama i-watermarking, okanye ukuba sele uyenzile kwaye uyayamkela indlela yokwenza ngokukhawuleza nangokulula, iWatermark sisixhobo esingabizi kwaye sinomtsalane. Andikasifumani isisombululo esingcono. ” -UDan Frakes, iMacworld, i-4.5 yeempuku ezi-5.
* I-iPhone, iPod touch, kunye ne-iPad
* Ifuna i-OS OS 3.1.2 okanye kamva
Ixabiso kunye nokufumaneka:
I-iWatermark 1.4 ithengiswa nge- $ 0.99 USD kuphela (okanye isixa esilinganayo kwezinye iimali) kude kube ngumhla we-6/14/10 kwaye ifumaneka kwihlabathi jikelele ngokukodwa kwiVenkile ye-App kwicandelo lokufota. Inguqulelo yeMac kunye neWinerm yeWatermark nayo inokukhutshelwa kwindawo yethu. I-iWatermark isebenza kunye neKhanyani, iApile, iPhoto kunye nezinye izikhangeli zemifanekiso.
I-Plum emangalisayo: https://plumamazing.com
Ukuthengwa kunye nokukhutshelwa: http://itunes.apple.com/us/app/iwatermark/id357577420?mt=8
Icon ye-App: https://plumamazing.com/files/1012/6732/2473/AppIcon512.png
IPlum emangalisayo (eyayisakuba yiSoftware) yinkampani yabucala ebekelwe i-iPhone, iMac, iiWindows kunye nezicelo zeselula. IPlum emangalisayo ngumnikezeli wehlabathi jikelele wezicelo zeselfowuni kunye needesktop ukusukela ngo-1995. I-Plum emangalisayo iyenza kwaye ithengise eyayo isoftware kodwa ikwasebenza umsebenzi wophuhliso (inkqubo) kwezinye iinkampani kunye nabaxumi.
Sinomnqweno wokudala iimveliso ezintle. Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi ukuba unemibuzo, kufuneka i-app eyenzelwe okanye ufuna ukusebenzisana nathi.
Ngolwazi olongezelelweyo, nceda undwendwele iPlamu emangalisayo.
Ilungelo lokushicilela (C) ngo-2010 liyamangalisa. Onke Amalungelo Agciniwe. I-Apple, uphawu lwe-Apple, i-iPhone, i-iPod kunye ne-iPad ziimpawu ezibhalisiweyo ze-Apple Inc. e-US kunye / okanye nakwamanye amazwe.